Memoir to Ramanujan | ZAYYA
← Some Firefox Addon
အခု ဒီဇင်ဘာ ၂၂ – Srinivasa Ramanujan, သချာင်္ပညာဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ ဥာဏ်ကြီးရှင်တစ်ပါးရဲ့Birthday ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ နှစ်ကိုးဆယ် ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူ ချထား ပေးခဲ့တဲ့ သချာင်္သီဝရီတွေနဲ့ စဉ်းစားစရာ ပုစ္ဆာတွေက ကနေ့ထက်တိုင် ဆက်လက် အဖြေရှာနေရဆဲ ၊ လေ့လာ သုံးသပ် နေရဆဲပါ။ ဆရာ ဖော်ထုတ်သွားခဲ့တဲ့ Number Theory ( အထူးသဖြင့် – Ramanujan theta function ၊ Landau–Ramanujan constant ) ကို ကျနော် တို့ သင်္ချာသမားများ လေ့လာနေရဆဲ ၊ ကြိုးစားနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီညမှာ ဆရာ့အတွက် အမှတ်တရ အဖြစ် ဒီစာကို ရေးပါတယ်။
A.M 4:30 / 23.12.2010
“The mathematician’s patterns, like the painter’s or the poet’s, must be beautiful. The ideas, like the colours or the words, must fit together inaharmonious way. Beauty is the first test: there is no permanent place in this world for ugly mathematics.”
သချာင်္၏ စံပုံစံတို့ မည်သည် ပန်းချီဆရာ၏ စုတ်ချက်ကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ကဗျာဆရာ၏ စကားလုံးများ ကဲ့သို့လည်းကောင်း လှပစွာ သီဖွဲ့ထားကြသည်ချည်း ဖြစ်သည်။ အရောင်များ ၊ စကားလုံးများကဲ့သို့ပင် တွေးဆချက် စိတ်ကူးများသည် ညီညွတ်လှပစွာ တွယ်ဆက် နေကြရသည်။ အလှတရားသည်သာ သချာင်္ပညာ၏ စစ်မှန်သော မှတ်ကျောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဤလောကတွင် အကျည်းတန်သော သချာင်္အတွေးများအတွက် ခိုင်မာတည်မြဲသော နေရာမရှိကြောင်း သိအပ်သည်။
Great British Mathematician
ပုံမသွင်းဘဲ လှတဲ့ အလှတရားမျိုး
သစ္စာရိပ်သာ သွန်း မိုးထားကြောင်း
လောကရဲ့ အလှ တရားကို
ရုပ်သဏ္ဍာန်မှာ မရှာ၊ အတွေးစဉ်မှာ ရှာတဲ့သူ
စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ခဲတံတစ်ချောင်းသာ သုံးပြီး
ဝေးရာကို ပြေးနိုင်ခဲ့ သူ။
စား၊တွေ့၊နံ၊ သိ- အာရုံရှိသမျှမှာ သုညတကိုသာ မြင်ခဲ့ရသူ။
လောဘနဲ့ ဒေါသ အဟုန်မပါဘဲ
ဖြူစင်တဲ့ ပညာသက်သက်မှာ အာရုံကျက်စားနိုင်ခဲ့သူ။
ဆရာ ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။
ဆရာ ရာမာနုဂျာတို့ အပါအဝင် အခုခေတ် Pure Mathematics ၊ ရိုးရိုးသင်္ချာနယ်ပယ်မှ ပညာရှင်များ အထိ စိတ်ဝင်စား နေကြရဆဲဖြစ်တဲ့ Squaring the Circle ,UnrollaCircle withaStraightedge andaCompass, Zeno Paradox Problems ကို ဒီနေရာမှာ ရှင်းလင်းထားကြောင်း ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ဆရာ့ Biography အကျဉ်းကိုတော့ Wiki က ယူပါတယ်။
22 December 1887(1887-12-22)
Filed under maths, mood, poem Tagged with beauty, feel, maths, poem, theory